M/wayne Sheekh Shariif oo Mareykanka shir uga qabygalaya. – Radio Daljir
M/wayne Sheekh Shariif oo Mareykanka shir uga qabygalaya.
Nairobi, May 14 – Madaxwaynaha dowladda faderaalka ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa u dhoofay dalka Maraykanka.
Safarka madaxwaynaha uu ku aaday Maraykanka ayaa la sheegay inuu yahay mid uu uga qaybgali doono kulan Golaha Amaanka QM uu ka yeelan doono xaaladda Soomaaliya, sida laga soo xigtay warbaahinta afka dowladda ku hadasha.
M/wayne Sheekh Shariif ayaa dhowaan booqday dalka Uganda, waxaana uu kula soo kulmay masuuliyiinta dowladda Uganda oo uu kala hadlay arimaha Soomaaliya.